ग्यासको हाहाकार – Sajha Bisaunee
नयाँ संविधान घोषणा भएलगत्तै भारतीय पक्षले गरेको नाकाबन्दीका कारण मुलुकले थुप्रै कष्ट झेल्नुप¥यो । नाकाबन्दीका समयदेखि नै समस्याको रूपमा रहँदै आएको खाना पकाउने ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको अभाव अझै सामान्य हुन सकेको छैन । विशेष गरी खाना पकाउन ग्यासको हाहाकार बढेको छ । नाकाबन्दी खुलिसक्दा पनि ग्यासको चरम अभाव किन भइरहेको छ ? यसको गहन विश्लेषण र खोजी हुनु जरुरी छ । पहिलाको तुलनामा दोब्बर सिलिण्डर भित्रिँदासमेत सुर्खेतमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव भएको छ । भारतीय नाकाबन्दीको बेलादेखि नै यहाँका उपभोक्ताहरूले ग्यास नपाउनुको सास्ती भोगिरहेका छन् । नाकाबन्दी खुलेर आपूर्ति सहज हुँदा समेत उपभोक्ताले घरमा आवश्यकता भन्दा बढी स्टक राख्न थालेपछि जिल्लामा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसले यो सङ्कटको कारण उपभोक्ता आफै देखिएका छन् । हुन त सब उपभोक्ताले यस्तो कार्य भने गरेका छैनन् । तर पहुँचमा हुने केहीले गर्ने यस्ता कार्यले लाखौं उपभोक्ता मारमा परिररहेका छन् । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले समयमै ख्याल गरी समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ ।
ग्यास वितरण केन्द्रहरूका अनुसार जिल्लामा हरेक हप्ता ग्यास भित्रिन्छ । तर हरेक हप्ता जिल्लामा ग्यास भित्रिएको भए पनि अभाव सिर्जना कसरी भइरहेको छ त ? ग्यास वितरकहरूको भनाइलाई मान्ने हो भने उपभोक्ताहरूले नै आवश्यकभन्दा बढी सिलिण्डर स्टक राखेका कारण चरम अभाव देखिएको हो । अधिकांश उपभोक्ताले अहिले जिल्लामा भित्रिने सबै कम्पनीको ग्यास राखेका छन् । जसको सबैभन्दा बढी मारमा भाडामा बस्दै आएका परिवार र विद्यार्थीहरू परेका छन् । हिजोआज सर्वसाधारणहरू ग्यासको खोजीमा दिनहुँ धाउन थालेका छन् भने घण्टौंसम्म लाइनमा बस्न बाध्य छन् । तर पनि उनीहरूले सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन् । पहिलाको तुलनामा दोब्बर सिलिण्डर जिल्लामा भित्रिँदासमेत ग्यासको माग पूरा गर्न नसकेपछि बिक्रेताहरू समेत हैरान भएका छन् । एउटै उपभोक्ताले घरमा आवश्यकता भन्दा बढी सिलिण्डर स्टक राखेका कारण बजारमा ग्यासको हाहाकार भएको बिक्रेताले बताएका छन् । तर जिल्लामा ग्यासको हाहाकर हुनुका कारण यो मात्रै पनि होइन । यसको खोजी जरुरी छ । केही समयअघि बजार अनुगमन समितिले ग्यास बिक्री केन्द्रहरूको अनुगमन गर्दा जिल्लाका लागि आएका ग्यासका सिलिण्डर काठमाडौं, दैलेख, कालिकोट लगायतका जिल्लाहरूमा जाने गरेको पाइएको थियो । आरोप उपभोक्ताहरूको टाउकोमा थुपारेर कालोबजारी त भइरहेको छैन ?
नाकाबन्दी भन्दा पहिलाको तुलनामा यी कम्पनीले अहिले जिल्लामा दोब्बर सिलिण्डर भिœयाएको दाबी गरेका छन् । दोब्बर सिलिण्डर भित्रिँदासमेत ग्यासको अभाव कायमै कसरी हुन पुग्यो ? स्थानीय प्रशासन र बजार अनुगमन समितिले यसतर्फ वास्ता नै गरेको छैन । कहिले काहीं मात्र कर्मकाण्डी रूपमा बजार अनुगमन गर्ने समितिले ठोस काम गरेको देखिँदैन । केही समयअघिका अनुगमनका क्रममा ग्यास भित्रिएको जानकारी उपभोक्ताहरूले जानकारी पाउने गरी सार्वजनिक गर्न निर्देशन समितिले दिएको थियो । तर ग्यास बिक्रेताहरूले उक्त निर्देशनलाई बेवास्ता गरी हालसम्म पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । अनुगमन समितिले पनि निर्देशन दिनुलाई नै आफ्नो जिम्मेवारी ठान्यो र निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएकोबारे चासो नै राखेन । जसको परिणाम ग्यास बिक्रेताहरूको मनोमानी चल्दै आएको छ । होटल लगायत पहुँचमा हुने अन्यले पनि एकै पटक दर्जनभन्दा बढी सिलिण्डर लैजान गरेका छन् । तर सामान्य उपभोक्ता एउटा सिलिण्डर नपाएर छटपटिन बाध्य छन् । यसलाई रोक्न सम्बन्धित निकायले पहल गर्न सकेमा मात्र ग्यासको हाहाकार रोकिनेछ ।
प्रकाशित मितिः १६ चैत्र २०७२, मंगलवार ०५:५७